Golaha Ammaanka QM oo ku baaqay in Talaabo laga qaado Kooxaha qatarta ku ah Ammaanka Somalia – idalenews.com
Golaha Ammaanka QM, oo shalay shir ka yeeshay Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay si kulul u Cambaareeyeen kuwii ka dambeeyay Falalkaas Argagixiso, oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 40-ruux.
Haddal qoraal ah oo ay soo saareen 15-ka Xubnood ee Golaha Ammaanka QM, ayee waxa ay ku sheegeen inay ka xun yihiin Khasaaraha dadka Ra’yidka ah ee ka soo gaaray weerarkaasi, wuxuuna Golaha hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in Talaabo laga qaado Kooxaha Khatarta ku ah Nabadda, Ammaanka iyo degnaanshaha Somalia.
Goluhu waxay sheegeen in loo baahan yahay in la sii wado Howlaha lagu taageerayo Nabada iyo dib u heshiisiinta Somalia, iyagoo xusay in guddi cusub oo gaar ah ka socda Hawlgalka QM ee Siyaasadda loo soo diri doono Somalia.
Dhinaca kale, Xoghayaha Guud QM Ban Ki’moon, ayaa tilmaamay inaysan falalka Argagixisda wiiqi doonin dadaalka ay Ummaadda Soomaaliyeed ugu jirto sidii ay Nabad iyo Ammaan ugu soo dabaali lahaayeen Dalkooda.
Ban Ki Moon oo mar kale ku celiyay inay QM sii wadeyso Taageerada ay u fudiyaan Dowladda Somalia, Hay’addaha Xukuumadda iyo Ummadda Soomaaliyeed.
Qarax xoogan oo lala Beegsaday Ciiddamadda Djibouti ee Magaaladda Beladweyne